मेलिना राईले गाइन् थारु गीत
लोकप्रिय गायिका मेलिना राईले पहिलोपटक थारु भाषाको गीत गाएकी छिन् । उनले ‘चाँद जैसिन तोहार सुरतिया’ बोलको गीत गाएकी हुन् । उनलाई स्वरमा थारु गायक नरेश जोगीले साथ दिएका छन् । नरेशकै शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियो हालै युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा संगीत संयोजन विशाल निरौलाले गरेका छन् । गीतको भिडियोमा थारु मोडलद्धय जेएमसी चौधरी र करिष्मा चौधरी फिचरिङ छन् । ‘मलाई विभिन्न समुदायका भाषामाथि गीत गाउन मनपर्छ,’ मेलिनाले भनिन्, ‘थारु भाषा त बुझ्दिन तर गीत गाउने अवसर पाउँदा निकै खुशी छु, रमाइलो ...
मंसिर २० -कसलाई रहर नहोला, सलमान खानको जस्तो जिन्दगी जिउने ! तर, स्वयं सलमानचाहिँ आफ्नो दुनियाँदेखि खासै खुसी छैनन् रे । उनले हालैको एक कार्यक्रममा आफूले बोरिङ जिन्दगी बिताइरहेको बताएका छन् । ‘मैले बोरिङ तर कठोर मेहेनत गर्नुपर्ने जिन्दगी जिएको छु,’ उनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन्, ‘मेराबारे बनेका आमधारणाभन्दा विपरीत छ मेरो दुनियाँ ।’ सलमानले आफू अझै पनि एककोठे अपार्टमेन्टमा बस्ने गरेको बताएका छन् । निकै साधारण जिन्दगी गुजारिरहेको सलमानको भनाइ छ । आफ्नो लाइफस्टाइललाई लिएर समाचारमा आउने कतिपय हावादारी कुराले साह्रै अप्ठ्यारो महसुस गराउने ...
मंसिर १९ -नेपालका प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलमध्ये काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) एक हो । यो हुन थालेकै १७ वर्ष भइसकेछ । पहिले दुई वर्षमा एकपटक हुन्थ्यो भने अचेल वर्षैपिच्छे हुन्छ । किम्फको पुरानो ठेगाना रुसी सांस्कृतिक केन्द्र हो, त्यसपछि सभागृह र पर्यटन बोर्ड हुँदै अहिले कमलपोखरीको कुमारी हल पुगेको छ । एउटा महोत्सवमा औसतमा सय वटा फिल्म देखाउँदाको दरले किम्फमा अहिलेसम्म १४ सय देशी/विदेशी फिल्म प्रदर्शन भएका छन् । किम्फकै माध्यमबाट नेपालका थुप्रै फिल्म मेकरले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पाए । पाइरहेकै छन् । तीमध्ये ...
मंसिर १९ -नरगिस फाखरी र उदय चोपडाको सम्बन्ध साउनेझरी जस्तो छ । प्याचअप र ब्रेकअपको कुनै टुंगो हुँदैन । कहिले मिलिरहेका हुन्छन् त कहिले बाझिरहेका । केही अघि मात्रै उदयले विवाह गर्न नमानेकाले दुईबीच मनमुटाव भएको खबर बाहिरिएको थियो । त्यही बेला अभिनेत्री नरगिस झोलाझ्याम्टा कसेर एकाएक अमेरिका फाल हानेकी थिइन् । अहिले फेरि उनीहरू एकजुट भएको बताइन्छ । दुवै एकअर्काको विशिष्ट साथ पाइरहेका छन् । यहाँसम्म कि, नरगिस उदय र उनकी आमासँग मुम्बईमै बस्न थालेकी छन् । उनीहरूको विवाहसम्बन्धी खबर पनि मिडियामा आउन थालेका छन् । यद्यपि, ...
मंसिर १९ -सांगीतिक समूह कुटुम्बसँग स्टेज सेयर गरेयता टुङनावादक वीरबहादुर विश्वकर्मालाई काठमाडौं आइरहनुपर्ने भएको छ । यसमा उनी खुसी छन् । यहाँ आउँदा घाटा हुँदैन । दुई/चार पैसा कमाएर घर फर्किन्छन् । त्यसले पाँच सदस्यीय परिवारको जीविका चल्छ । यसपालिको काठमाडौं यात्रा भने अलि चिन्ताजनक रह्यो । हुन त उनी खुसीसाथै राजधानी हिँडेका थिए । रत्नपार्क आउनुपर्ने गाडी कोटेश्वरमै बसिदिनाले तनाव आइलाग्यो । चालकले वीरबहादुर र उनका भान्जालाई रत्नपार्क जाने अर्को गाडीमा राखिदिए । रत्नपार्क ओर्लिएपछि मामा–भान्जाको होस उड्यो । तिनले अघिल्लो गाडीमै झोलाझ्याम्टा छोडेछन् ...
मंसिर १९ -तेस्रो ‘मिस क्विन लेखनाथ’ को उपाधि ज्योति खत्रीले जितेकी छन् । यहाँ शनिबार भएको फाइनलमा उनले सात प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारिन् । फस्ट रनरअप सब्रिना ओली र सेकेन्ड रनरअप दीपा आचार्य भए । ज्योतिले पुरस्कारबापत स्कुटर पाइन् । फस्ट र सेकेन्ड रनरअपले क्रमश: ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । लेखनाथ क्षेत्रकै एक मात्र ब्युटी कन्टेस्टमा १६–२५ वर्षका युवतीले भाग लिन पाउने प्रावधान छ । देखावटी सुन्दरता मात्र नभएर व्यक्तित्वसहितको सुन्दरतामा निखारता ल्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिता गरेको संयोजक सन्दीप पौडेलले बताए । लेखनाथ मिडिया हाउसको आयोजना, ...
मंसिर १९ -पहिलोपटक यहाँ आयोजित मिस्टर एन्ड मिस कल्चर एन्ड टुरिज्म प्रतिस्पर्धामा अजित घर्तीमगर र सहनाज शेख विजेता भएका छन् । संस्कृति संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै आयोजित प्रतिस्पर्धामा उल्लेख्य संख्यामा तन्नेरीहरू सहभागी भए । मिस कल्चरको उपाधि विजेता शेखले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने चाहना रहेको बताइन् । ११ कक्षाकी विद्यार्थीले पुरस्कारबापत ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिन् । उनलाई ‘मिस पोखरा’ ममता जोशीले ताज लगाइदिएकी थिइन् । मिसतर्फ नै कञ्चन दुरा फस्र्ट रनरअप र शिल्पा थापामगर सेकेन्ड रनरअप भए । उनीहरूले क्रमश: १५ हजार र १० ...
स्टार स्क्रिनमा राजकुमार राज
फिल्म अवार्डमा एउटै कलाकारले दुई फिल्मबाट फरक फरक विधामा अवार्ड पाउनु दुलर्भ अवसर नै हो । पछिल्लोपटक फिल्म ‘न्यूटन’मा अभिनय गरेर चर्चा कमाएका अभिनेता राजकुमार राव यो मामलामा भाग्यमानी बनेका छन् । आइतबार राति मुम्बईमा भएको ‘स्टार स्क्रिन अवार्ड’मा उनले फिल्म ‘न्यूटन’बाट ‘बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स’ र ‘बरेलीकी बर्फी’बाट ‘बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर’को अवार्ड पाए । अवार्डमा फिल्म ‘न्यूटन’ले ‘बेष्ट फिल्म’को अवार्ड पनि सुरक्षित गरेको थियो । यो साल राजकुमार राव अभिनित सात फिल्म रिलिज भएका थिए । सात मध्ये पाँच फिल्मले मुनाफा आर्जन गरेका थिए । ...
अभिनेता शशि कुपुरको निधन
भारतका चर्चित चलचित्र अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक शशि कपुरको निधन भएको छ। मुम्बईको कोकिलावेन अस्पतालमा सोमबार साँझ पाँच बजेर २० मिनेटको समयमा उनको निधन भएको थियो। ७९ वर्षका कपुर केही समयदेखि विरामी थिए। उनले केही हिन्दी तथा अंग्रेजी चलचित्रमा काम गरेका थिए। उनका जब जब फूल खिले (1965), वक्त (1964), अभिनेत्री (1970), दीवार (1975), त्रिशूल (1978), हसीना मान जाएगी (1968) जस्ता चलचित्र चर्चित छन्। उनले बलिउनमा केही सम्झन लायक चलचित्रको निर्माण समेत गरेका छन्। जसमा जुनून (1978), कलियुग (1980), 36 चौरंगी लेन (1981), ...
‘कागजपत्र’को फस्ट लुक
छायांकन भइरहेको फिल्म ‘कागजपत्र’मा अभिनय गरेका कलाकारहरुको फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । फिल्म निर्माण यूनिटले छायांकन स्थलबाटै कलाकारको लुक्स सार्वजनिक गरेको हो । ‘कागजपत्र’को हाल दाङको तुलसीपुरमा छायांकन भइरहेको छ । सामजिक प्रेमकथामा बनिरहेको फिल्मलाई अपिल विष्टले निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्ममा नाजीर हुसैन, शिल्पा मास्के, भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी, खिलेन्द्र तिमल्सिना लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । फिल्मको कथा पनि अपिल विष्ट आफैले लेखेका हुन् । ‘कागजपत्र’का छायाँकार अस्ट्रेलियन सिनेम्याट्रोग्राफर क्यश्मिर डिक्सन हुन् । वर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिब्युसन प्रा.लिको प्रस्तुति रहेको ‘कागजपत्र’लाई खिलेन्द्र तिमल्सिना, मुकेश रेग्मी, प्रजापति सिवाकोटी, ...
हलिउड सुपरपावरको फिल्म ‘एभेन्जर – द इन्फिनिटी वार’ को ट्रेलर रिलिज भएदेखि नै युट्युबमा नेपालको ट्रेन्डिङमा पर्दै आइरहेको छ ।हाल भने उक्त फिल्मको ट्रेलर युट्युबको नम्बर एक ट्रेन्डिङमा परेको छ । हलिउडमा कमिक चरित्रमा बन्ने फिल्म एभेन्जरको अर्को भाग हो । स्पाइडर म्यान, थोर, आइरनम्यान जस्ता फिल्म बनाएको मार्भल कम्पनीले फिल्ममा मा अन्य फिल्मका महाशक्ति भएका पात्रलाई अटाएको छ । फिल्म काल्पनिक र एक्सनमा आधारित छ । source ; nepaljapan.com
‘टाइगर जिन्दा हे’को दोस्रो गीत सार्वजनिक
सलमान खानको आगामि फिल्म ‘टाइगर जिन्दा हे’ को दोस्रो गीत रिलिज भएको छ। वर्षकै प्रतिक्षित फिल्मको रुपमा हेरिएको उक्त फिल्मको रोमान्टिक गीत ‘दिल दिवाना गल्लान’ सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक गीतमा विशाल धडलानी र शेखरले संगीत दिएका छन् भने अतिफ अश्लामले गीतमा स्वर दिएका छन्। भिडियोमा सलमान र कट्रिना कैफ फिचरिङ छन्। यशराज फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई अलि अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन् । ‘एक था टाइगर’को सिक्वेलका रुपमा निर्माण भएको फिल्म ‘टाइगर जिन्दा हे’डिसेम्बर २२ बाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। यस फिल्म भारतीय नर्स अपहरणको सत्य घटनामा आधारित छ। फिल्ममा ...
काठमाडौं : पहिलो पटक हुन थालेको मिस एन्ड मिस्टर थारू प्रतियोगिताको पब्लिक च्वाइस भोटिङ शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । भोटिङ पुस १ गतेसम्म चल्ने आयोजकले जनाएका छन् । त्यस्तै आज आइतबार राष्ट्रिय नाचघर जमलमा मिस एन्ड मिस्टर थारूका प्रतियोगीहरू आआफ्नो प्रतिभा देखाउने कार्यक्रम रहेको आयोजक सुरेश चौधरीले बताए ।प्रतियोगितामा युवा २१ र युवती २७ गरी ४८ जना सहभागी छन् । प्रतिभा प्रदर्शन र एसएमएस भोटिङको आधारमा टप टेन चुनिने छन् । source ; annapurnanews.com
मंसिर १७-ओम प्रतीक गुरुङको निर्देशन रहेको फिल्म ‘बटरफ्लाई’ को शनिबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । आर्यन अधिकारी र प्रियंका कार्की अभिनीत उक्त फिल्मको ट्रेलरमा प्रेम, रोमान्स, सस्पेन्स र एक्सनको भरपुर प्रयोग गरिएको छ । निर्देशक ओम प्रतीककै लेखन रहेको फिल्ममा अर्पण थापा, सुषमा कार्की, रवीन्द्र खड्का, सुरवीर पण्डित, मोहन निरौलालगायतको पनि अभिनय रहेको छ । पुस २८ लाई रिलिज मिति तय गरेको फिल्मलाई पुष्पाञ्जली अधिकारी, रामशरण राना र भूपेन्द्र सुवेदीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् भने अर्जुन पोखरेल, विकास चौधरी र दीपक शर्माले संगीत भरेका छन् ...
धुर्मुस—सुन्तलीलाई भैरव अर्याल पुरस्कार
मंसिर १७ -हास्यकलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ लाई शनिबार एक समारोहमा भैरव अर्याल स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । सिस्नुपानी नेपाल र साहित्य संगम मकवानपुरले हास्यव्यग्यकार भैरव अर्यालेको स्मृतिमा उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष तथा साहित्यकार डा. सुधा त्रिपाठीले पुरस्कृतद्वयलाई २१ हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेकी थिइन् । डा. त्रिपाठीले धुर्मुस–सुन्तली हास्यकलाकार मात्र नभई बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको जिकिर गरिन् । मुलुक परिवर्तनका निम्ति धुर्मुस र सुन्तलीजस्ता हजारौं मानिसको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले थपिन, ‘धुर्मुस–सुन्तलीले सामाजिक क्षेत्रमा ...
​खोटाङ आइडल हुने
खोटाङ – खोटाङमा खोटाङ आइडल हुने भएको छ । आयोजक नेपाल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीले बिहीबार हलेसी साप्ताहिकको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘खोटाङ आइडल’ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । चौथो अडिसनपछि भोटिङ राउण्डमा पुग्ने प्रतियोगीतामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने प्रतिभालाई नगद ५४ हजार ५ सय ७४ रुपैयाका साथमा ६ महिना संगीत विद्यालयमा अध्ययनको अवसर, एउटा गीत रेकर्डको व्यवस्था तथा ट्रफी प्रदान गरिने आयोजक समितिका संयोजक जीवनकुमार राईले बताउनुभयो । दोश्रो हुने प्रतिभाले नगद २४ हजार ५ सय ७४ का साथमा ३ महिना संगीत अध्ययन ...